दैनिक कति पटक कफि पिउने ? - Khabar Break | Khabar Break
तपाईं कफी पिउँन कत्तिको सौखिन हुनुहुन्छ रु हुनुहुन्छ भने याद गर्नुस एक दिनमा चार कपभन्दा बढी नपिउनुस । बढी कफी पिउँदा निद्रा लाग्दैन । र, मानसिक तथा शारीरिक समस्या पनि बढाउन सक्छ । यसले मानिसलाई डर पैदा गर्ने र मुटुको धड्कन रोक्ने सम्भावना पनि बढाइदिन्छ ।
फेसबुकले चाल्दै नयाँ कदम,सत्यता नभएका पोष्ट गरे ब्लक गरिने
रक्सिले मात्तिएकी यि महिला ट्वाईलेटमा लडेपछि, भयो भिडियो भाईरल ( भिडियो)
मदिराको चुस्कीले भोलिपल्ट ह्याङ बनायो ? अपनाउनुहोस् यी ७ तरिका
हुनेवाला बुहारीलाई ससुराले यस्तो हर्कत गरेपछि…
महिलाको योनी किन चिलाउँछ ? यसरी गर्न सकिन्छ उपचार
ढाड दुख्यो ? त्यसो भए यस्तो उपचार गर्नुस
महिलाको यौन इच्छा बढाउने भ्लेसी नामक भियाग्रा स्वीकृत
सोह्रश्राद्ध सुरु,श्राद्धमा के गर्ने र के नगर्ने ?